SONATA-CANTATA: June 2008
"Loving-kindness is love without attachment, craving or lust."
Notes: 12 ways x4kinds of mettā = 48 kinds of mettā
AhaṃAvero homi. အဟံ အဝေရော ဟောမိ May I be free from enmity(danger)
Abyāpajjo homi. အဗျာပဇ္ဇော ဟောမိ Be free from mental suffering.
Anīgho homi. အနီဃော ဟောမိ Be free from physical suffering.
Sukhī attānaṃ pariharāmi သုခီ အတ္တာနံ ပရိဟရာမိ Take care of myself happily.
mama mātāpitu Ācariyā ca မမ မာတာပိတု အာစရိယာ စ May my parents, teachers
Ñata mittā ca ဉာတ မိတ္တာ စ Relatives,
Sabrahmacārīno ca သဗြဟ္မစာရီနော စ And dhamma friends,
Averā hontu အဝေရာ ဟောန္တု May they be free from enmity,
Abyāpajjā hontu အဗျာပဇ္ဇာ ဟောန္တု Be free from mental suffering,
Anīghā hontu အနီဃာ ဟောန္တု Be free from physical suffering,
Sukhī attānaṃ pariharantu သုခီ အတ္တာနံ ပရိဟရန္တု Take care of themselves happily.
Imasmiṃ ārāme ဣမသ္မိံ အာရာမေ In this compound
sabbe yogino သဗ္ဗေ ယောဂိနော May all yogis (mediators)
Averā hontu အဝေရာ ဟောန္တု Be free from enmity,
Imasmiṃ ārāme ဣမသ္မိံ အာရာမေ In this compound,
Sabbe bhikkhu သဗ္ဗေ ဘိက္ခု May all the monks
Samnerā ca သမဏေရာ စ And novice monks
Upāsaka upāsikāyo ca ဥပါသက ဥပါသိကာယော စ Laymen and laywomen
Averā hontu, အဝေရာ ဟောန္တု Be free from enmity,
Abyāpajjā hontu, အဗျာပဇ္ဇာ ဟောန္တု Be free from mental suffering,
Anīghā hontu, အနီဃာ ဟောန္တု Be free from physical suffering,
Sukhī attānaṃ pariharantu. သုခီ အတ္တာနံ ပရိဟရန္တု Take care of themselves happily.
Amhākaṃ catupaccaya dāyākā အမှာကံ စတုပစ္စယ ဒါယာကာ May our donors of four requisites
Amhākaṃ ārakkha devatā အမှာကံ အာရက္ခာ ဒေ၀တာ May our guardian deities
Imasmiṃ vihāre ဣမသ္မိံ ၀ိဟာရေ In this temple
Imasmiṃ āvāse ဣမသ္မိံ အာဝါသေ In this dwelling
Ārakkha devatā အာရက္ခ ဒေ၀တာ May guardian deities
5 - Anodhisa pharaṇ Mettā အနောဓိသ ဖရဏ မေတ္တာ ၅-ပါး Unspecified Pervasion of Mettā
1. Sabbe sattā ၁။ သဗ္ဗေ သတ္တာ May all beings
2. Sabbe pāṇā ၂။ သဗ္ဗေ ပါဏာ All breathing beings
3. Sabbe bhūtā ၃။ သဗ္ဗေ ဘူတာ All creatures
4. Sabbe puggalā ၄။ သဗ္ဗေ ပုဂ္ဂလာ All individuals
5. Sabbe attabhāva-pariyāpannā ၅။ သဗ္ဗေ အတ္တဘာဝပရိယာပန္နာ All personalities
7- Odhisa pharaṇ Mettā သြဓိသ ဖရဏ မေတ္တာ ၇-ပါး Specified Pervasion of Mettā
6. Sabbā itthiyo ၆။ သဗ္ဗာ ဣတ္ထိယော All women
7. Sabbe purisā ၇။ သဗ္ဗေ ပုရိသာ All men
8. Sabbe Ariyā ၈။ သဗ္ဗေ အရိယာ All noble ones
9. Sabbe anariyā ၉။ သဗ္ဗေ အနရိယာ All not noble ones
10. Sabbe devā ၁၀။ သဗ္ဗေ ဒေ၀ါ All deities
11. Sabbe manussā ၁၁။ သဗ္ဗေ မနုဿာ All human beings
12. Sabbe vinipātikā ၁၂။ သဗ္ဗေ ၀ိနိပါတိကာ All those in unhappy states
(A) Averā hontu, အဝေရာ ဟောန္တု Be free from enmity,
(B) Abyāpajjā hontu, အဗျာပဇ္ဇာ ဟောန္တု Be free from mental suffering,
(C) Anīghā hontu, အနီဃာ ဟောန္တု Be free from physical suffering,
(D) Sukhī attānaṃ pariharantu. သုခီ အတ္တာနံ ပရိဟရန္တု Take care of themselves happily.
Dukkhā muccantu ဒုက္ခာ မုစ္စန္တု May they be free from suffering
Yathā Laddha-sampattito ယထာ လဒ္ဓသမ္ပတ္တိတော May whatever relatedness possessed
mā vigacchantu မာ ၀ိဂစ္ဆန္တု Not be lost
Kammassakā ကမ္မဿကာ Have kamma as their true property.
ဒုက္ခာ မုစ္စန္တု = ကရုဏာဘာဝနာ(development of Compassion)
ယထာ လဒ္ဓသမ္ပတ္တိတော မာ ၀ိဂစ္ဆန္တု= မုဒိတာဘာဝနာ ( development of Sympathetic Joy)
ကမ္မဿကာ= ဥပေက္ခာဘာဝနာ (development of Equanimity)
10 - disā pharaṇ Mettā ဒိသာ ဖရဏ မေတ္တာ Directional Pervasion of Mettā
1. Puratthimāya disāya ၁။ ပုရတ္ထိမာယ ဒိသာယ In the Eastern direction
2. Pacchimāya disāya ၂။ ပစ္ဆိမာယ ဒိသာယ In the Western direction
3. Uttarāya disāya ၃။ ဥတ္တရာယ ဒိသာယ In the Northern direction
4. Dakkhiṇāya disāya ၄။ ဒက္ခိဏာယ ဒိသာယ In the Southern direction
5. Puratthimāya anudisāya ၅။ ပုရတ္ထိမာယ အနုဒိသာယ In the South-East direction
6. Paccimāya anudisāya ၆။ ပစ္ဆိမာယ အနုဒိသာယ In the North-West direction
7. Uttarāya anudisāya ၇။ ဥတ္တရာယ အနုဒိသာယ In the North-East direction
8. Dakkhiṇāya anudisāya ၈။ ဒက္ခိဏာယ အနုဒိသာယ In the South-West direction
9. Heṭṭhimāya disāya ၉။ ဟေဋ္ဌိမာယ ဒိသာယ In the downward direction
10. Uparimāya disāya ၁၀။ ဥပရိမာယ ဒိသာယ In the upward direction
Sabbe sattā, Sabbe pāṇā သဗ္ဗေ သတ္တာ, သဗ္ဗေ ပါဏာ May all beings, all breathing beings
Sabbe bhūtā, Sabbe puggalā သဗ္ဗေ ဘူတာ, သဗ္ဗေ ပုဂ္ဂလာ All creatures, all individuals
Sabbe attabhāva-pariyāpannā သဗ္ဗေ အတ္တဘာဝပရိယာပန္နာ all personalities
Sabbā itthiyo, Sabbe purisā သဗ္ဗာ ဣတ္ထိယော, သဗ္ဗေ ပုရိသာ All women, all men
Sabbe Ariyā, Sabbe anariyā သဗ္ဗေ အရိယာ, သဗ္ဗေ အနရိယာ All noble ones, all not noble ones
Sabbe devā, Sabbe manussā သဗ္ဗေ ဒေ၀ါ, သဗ္ဗေ မနုဿာ All deities, all human beings
Sabbe vinipātikā သဗ္ဗေ ၀ိနိပါတိကာ All those in unhappy states
Notes: 10 directions x 48 kinds of mettā = 480 kinds of mettā (directional)
480 directional + 48 undirectional = 528 Kinds of mettā
Uddhaṃ yāva bhavaggā ca ဥဒ္ဓံယာဝ ဘ၀ဂ္ဂါ စ As far as the highest existence
Adho yāva avīcitto အဓော ယာဝ အ၀ီစိတော And as far down as the lowest
Samantā cakkavāḷesu သမန္တာ စက္က၀ါဠေသု In the entire universe
Ye sattā pathavīcarā ယေ သတ္တာ ပထ၀ီစရာ Whatever beings that move on earth
Abyāpajjā niverā ca အဗျာပဇ္ဇာ နိဝေရာ စ May they be free from suffering and enmity
Niddukkhā ca anupaddavā နိဒ္ဒုက္ခာ စ နုပဒ္ဒ၀ါ from physical suffering and dangers
Ye sattā udakecarā ယေ သတ္တာ ဥဒကေစရာ Whatever beings that move in water
Ye sattā ākā secarā ယေ သတ္တာ အာကာသေစရာ Whatever beings that move in air
ကိုAlvin၏ ဝေမျှခြင်း- The chant of Metta (Pali/English/Myanmar)
ဤပုံကို အရှင်ပညာဝံသ မဟာဓမ္မာစရိယ;M.A ၏ မိထွေးတော်ဂေါတမီနှင့် ဘိက္ခုနီသာသနာ စာအုပ်မျက်နှာဖုံးမှ ရယူပါသည်
ဒီအ၀တ် ၀တ်ဖို့ ဘယ်လို သဒ္ဓါတရား နဲ့ ဆုံးဖြတ်လိုက်လဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဆန်းစစ်တော့
သဒ္ဓါ ဆိုတဲ့ တရားကို ကြည်လင်ခြင်းလို့ပဲ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ရလေမလား။
နောက်ကြိစိတ်တွေ နည်းပါးသွားတာတော့ သိသိသာသာပဲ။
ကြည်လင်နေတဲ့ စိတ်အခံဓါတ်ကြောင့် ပေလား။
ကြားဖူးထားတဲ့ “ဥာဏ်မမြင်၊ အထင်နဲ့သာ ပြီးရော” ဆိုတဲ့ စကား၊ “ကိုယ့်စိတ်နဲ့နှိုင်း မရိုင်း” ဆိုတဲ့ စကားတွေ ရဲ့ အဓိပ္ပါယ် ကောင်းကောင်းနားလည်လာတယ်။ ဘယ်အရာကို မဆို ကိုယ့်စိတ်နဲ့ နှိုင်းပြီး ထင်ချင်တိုင်းထင်၊ နောက်ဆက်တွဲ အပြော၊ အလုပ်တွေ ပါလာ။ အဆုံးမှာ စစ်ကြည့်တော့ အမှားကအများသား။ ဒီလိုနဲ့ ဟင်းဟင်း… ကိုယ့်အဆင့်အတန်းကို ကိုယ့်ဖာသာ အကဲခတ်မိလာတယ်။ အမြတ်တွေပါ။
အဘိဓမ္မာ သင်တန်းတက်ဖူးပေမဲ့ စိတ်တွေ အစဉ်အတိုင်း ဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာ ကိုယ်တွေ့ နဲ့ ကိုက်ကြည့်နိုင်ဖို့ဝေးစွ၊ စာတွေ့ အဖြစ်တောင် အလွတ်မရနိုင်တဲ့ ကိုယ့်အဆင့်အတန်း။
အဆင့်အတန်းရှိတဲ့ သာသနာမှာ အောက်ဆုံးအဆင့်လေးလောက်တော့ မှီမိ၊ ထောက်မိအောင်…
အတ္တ၊ မာန၊ လောဘ၊ ဒေါသ နဲ့ မောဟတွေ
အခွင့်အရေးဆိုတာ၊ တသက်မှာ နှစ်ခါပေါ်ဖို့ မလွယ်ဘူးတဲ့…
ဒီအခွင့်အရေးကို အမိအရ ကိုယ်,ဆုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့တယ်။
"ငါ၏ကိုယ်မှာ၊ နံသာမွှေးကြိုင်၊ မြဲခိုင်လှစွာ၊ ကောင်းရာမမြင်၊ ဆံပင်သာရှိ၊ အမွှေးရှိ၍၊ ရှိသည့်လက်သည်း၊ ခြေအသည်းနှင်၊့ သွားလည်းတစ်ထွေ၊ အရေတမျိုး၊ ညှီနံဆိုးသည်၊ အသိုးအပုတ်ချည်းပါတကား။ "
ရှုပ်ထွေးထူထပ်၊ လိမ်ကောက်ကြမ်းရှ၊ ဒုက္ခပေးလှတဲ့ ဒီဆံပင်တွေ ရိတ်သင်လိုက်ရတာနဲ့တင် စိတ်ထဲတော်တော်ရှင်းသွားတယ်။
တစ်ယောက်သောသူက သူရိတ်ပေးပါရစေ လို့ ဆရာလေးထံခွင့်တောင်းလေတော့
သားဦးလေးဖွားပြီးစ ယုယစွာဖြီးသင် သူရှင်းကာပေးခဲ့တာသတိရ
ဆရာလေးခွင့်မပေးခဲ့တာ စိတ်ထဲက ဒီလိုနားလည် ...
“တဏှာရာဂသည် မေတ္တာလိုလိုနှင့် ၀င်တတ်သည်” ဟု ရှင်တော်ဘုရား ထုတ်ဖေါ်ဟောကြား၊ မိုးကုတ်ဆရာတော် ဘုရားကြီးထံမှ တဆင့်နားကြားခဲ့ရဖူးလေသော တရားတော်ကို အမှတ်ရ...
ပညာစခန်း တတ်လှမ်းစဟန်ပြင် သတိတရား ကိုယ်ရုံကို ချပ်ဝတ်တန်ဆာလို ဆင်မြန်းရပါလေပြီ။
အာရုံဆွမ်းစားဖို့ အိမ်တစ်အိမ်ကို ကြွရတယ်။ ဆရာတော်ကြီးက ရှေ့ဆုံးကကြွလို့ သံဃာလေးပါးတန်းစီလို့ လိုက်တယ်။ နောက်ကမှ သားကိုရင်။ ဆရာလေး မပုညက ကိုရင်နောက်က ခပ်ခွာခွာလေးလိုက်။ နောက်ကမှ အမှတ်သတိနဲ့ မသုမနပေါ့။
ဝေလီဝေလင်း စင်္ကြံလေးလျှောက်ရတာ သာတောင့်သာယာရှိသလိုလိုနဲ့ ငါဆိုတဲ့ ပမွှားကောင်က၀မ်းတစ်ထွာကို ဒီလို ကျောင်းရတာ ၀မ်းနည်းလာချင်သလိုလို
ဒို့ အတွက် လမ်းကြမ်းကြီးကို လျှောက်ခဲ့ရတာ လေးအင်္သချေနဲ့ ကမ္ဘာတစ်သိန်းတဲ့။
sacrifice ဆိုတဲ့စကားလုံးကို နားထဲက အထပ်ထပ်ကြား။
ဘ၀သစ်ရဲ့ စဦး ခရီး